Indlu encane ngasehlathini - I-Airbnb
Indlu encane ngasehlathini
Røyken, Buskerud, i-Norway
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Turid
U-Turid Ungumbungazi ovelele
Itholakala engadini ethokomele, ezungezwe amasimu, amahlathi nendawo yokuhlala esabalele, lena yindawo ekahle yokuphumula. Kungaba yisiqalo sokuhlala okusebenzayo. Kukhona ibanga elifushane (amakhilomitha angu-3) ukuya ezindaweni eziningi, esitolo sokudla, ezokuthutha, njll.
Indlu incane kodwa inakho konke okudingayo. Ikhishi elikhulu futhi elithokomele, ikamelo lokulala elivulekile elinombhede olala abantu ababili, ikamelo lokugezela elikhulu, elihle nendawo yokuphumula encane ye-TV. Endlini, kunendawo enkulu yokusebenzela engasetshenziswa lapho indlu iqashwa.
Indawo ilungele kokubili ukuhlala okuthulile noma okusebenzayo. Ingadi enazo zonke izimbali zayo iyindawo yazo zonke izinzwa futhi kunendawo enhle yokuhamba ngezinyawo ngaphandle nje komnyango. Uzothola nemizila yamabhayisikili, imizila yokugibela engu-100 eqhele ngemizuzu engu-5, ibhishi, indawo yokudlala igalofu, nendawo yokubhukuda enkulu ebangeni elingamakhilomitha ambalwa.
Le ndawo itholakala endaweni ephakeme ngaphezu kwe-Drammensfjord. Indawo enhle yezintaba enemizila yezintaba kuzo zonke izinkomba kanye namathuba alabo abenza amabhayisikili angekho emgwaqeni noma abaqwala amatshe. Le ndlu isendaweni eyake yaba yikotishi, manje ehlala unyaka wonke. Kungase kube khona umsindo "ojwayelekile", kodwa isikhathi esiningi iculo lezinyoni elibusayo.
Ehlobo, ngihlala kwenye indlu kule ndawo, futhi ngitholakala lapho ngidingeka.
Nsuku zonke ngisebenza engadini futhi ngiwusizo ngamathiphu nezeluleko ngalokho okuthakaselwayo endaweni yangakini.
UTurid Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Røyken namaphethelo